IGeofeedia: UkuJongwa kweendaba kwezeNtlalo, ubuNtlola kunye noHlahlelo ngeNdawo | Martech Zone
IGeofeedia: UkuJongwa kweMithombo yeendaba yezeNtlalontle, ubuNtlola kunye noHlahlelo ngeNdawo
NgoMgqibelo, uJanuwari 24, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
IGeofeedia liqonga elinelungelo elilodwa lomenzi lokuba abathengisi bangalisebenzisa ukubeka iliso kunye nokuhlalutya indawo yemithombo yeendaba esekwe kwindawo. Esi inokuba sisicwangciso esiliqili sokuthengisa kulawulo lwegama, okanye kwizicwangciso zokufumana kwangaphambili. Mhlawumbi ungumboneleli ngenkonzo okanye unabameli beenkonzo ezininzi kwimimandla ethile-unokujonga konke ukugcwala kwimithombo yeendaba zentlalo ngokukhankanywa okanye kwabo bafuna abathengi abafuna uncedo.
Iimpawu eziphambili zeGeofeedia kunye neziBonelelo
Monitor Hlanganisa kunye nokugcina umxholo wemidiya yoluntu kwimimandla echaziweyo.
isihluzo Cokisa iziphumo zophando ngegama elingundoqo, umsebenzisi, usuku, iyure, imithombo yeendaba zosasazo nokunye.
Ngcamango -Ukujonga imephu kubonisa indawo echanekileyo yomxholo wakho, umbono wekholaji ukubonisa ixesha kunye nokulandelelana kwezithuba kunye nokusasaza bukhoma kubonisa umxholo omtsha ngexesha lokwenyani ukusuka kwiindawo ezininzi kwiscreen esinye.
Cubungula -Idatha yam egciniweyo yokuchonga amagama aphambili, imisebenzi esekwe ixesha, iipowusta ezinempembelelo, imikhwa yomsebenzi, imithombo yeendaba zasekuhlaleni kunye nokunye.
Archive Gcina idatha yakho kwiziko ledatha esekwe kwilifu ukuze ufumane kwakhona kunye nohlalutyo.
Ukuthumela ngaphandle -I-Geofeedia ibonelela nge-API epheleleyo, ukuthunyelwa ngaphandle kwe-CSV, iiwijethi ezinokungeniswa kunye nokuthunyelwa kwedatha kwiRSS kwiifom ze-ATOM, zeGeoRSS okanye zeJSON.
Izaziso -Fumana izilumkiso ze-imeyile ezizenzekelayo ngexesha lokwenyani ngokusekwe kwigama elithile elingundoqo okanye kwigama lomsebenzisi.
guqula -Tolika iziphumo zokukhangela phantse kulo naluphi na ulwimi ngonqakrazo olunye.
Yenza imida yesiqhelo kwiSicelo sakho seMithombo yeendaba
Jonga indawo esekwe kwindawo yemithombo yeendaba kwi-Collage
Hlalutya iMithombo yeendaba yasekuhlaleni
Ukurekhoda uhlalutyo kunye nokuziva
Iimpembelelo - Umbono weKholeji
Ukufunda ngakumbi malunga nokujoliswa kwe-geosocial, khuphela iphepha labo elimhlophe, "Imephu yendlela yeGeosocial Marketer", namhlanje.
Khuphela iMephu yeNdlela yeMarkos yeGeosocial
tags: oovimba boluntuGeogeofediyangokwendawoIndawo yolumkiso kwimidiya yoluntuGISUhlalutyo lweendaba zosasazo lwasekhayaindawo esekwe kwimithombo yeendaba yoluntuizaziso zosasazo zasekuhlaleniamajelo eendaba ezentlaloubuntlola beendaba zosasazoukubeka iliso kwimidiya yoluntu
Ukuqonda ukuba ukuHlawula ngokuCofa ngokuNceda njani ukuKhangela okuPheleleyo